Idi Onye nrụpụta kacha mma na onye nrụpụta na ụlọ nrụpụta |Tongli
Onye nrụzi akpaaka
Ọkpụkpụ Arm Manipulator
Onye na-ahụ maka eriri waya
kreenụ dabara adaba
Onye njikwa ike
Trolley mkpagharị mkpanaka
Ụgbọ okporo ígwè dị elu
Mgbakọ ụgbọ ala
Ihe mgbochi eserese
Modul ike n'ime kabinet
Quartz dị nro
Mmiri na-ekpo ọkụ tank
Onye na-emegharị ihe na mgbachi
Isi ike ogwe akaonye na-emegharị ihes na-merenke ogwe aka siri ike.N'ihe banyere nguzogide torsion,dị ka workpiece bụ oge mgbe ma ọ bụ workpiece kwesịrị tụgharịa,it nwere ike iji naanịisiikeonye na-eji ogwe aka.
Manipulator nwere njide
a) Otu ike aka siri ike na-enyere aka manipulator nwere ike ịhazi oke dị iche iche site na 2 ruo 500kg.
b) Onye na-ahụ maka ike na-enye aka bụ nke onye nnabata nguzozi, ihe nrụnye na nhazi nhazi.
c) The manipulator host bụ isi ngwaọrụ na-aghọta na-abụghị ike ndọda na-ese n'elu ala nke ihe (ma ọ bụ workpieces) na ikuku.
d) The manipulator bụ ngwaọrụ na-aghọta na-aghọta nke workpiece na mezue kwekọrọ ekwekọ njikwa na mgbakọ chọrọ nke onye ọrụ.
e) Nrụnye nrụnye bụ usoro na-akwado usoro akụrụngwa niile dịka mpaghara ọrụ onye ọrụ na ọnọdụ saịtị.
Ihe nlere anya
Radius na-arụ ọrụ
Akụkụ ntụgharị A
Akụkụ ntụgharị B
Akụkụ ntụgharị C
a) Ọ nwere ike ịghọta ọnọdụ nguzosi ike ndọda nke ihe dị arọ dị iche iche, nke kwesịrị ekwesị maka ọrụ mbufe ziri ezi nke ihe.
b) Mgbe ọ dịghị ibu, zuru ibu na dị iche iche workpieces na-esichara, usoro nwere ike ịhụ na arọ mgbanwe na-aghọta na sere n'elu ala nke ibu na atọ akụkụ oghere, nke na-adaba adaba maka kpọmkwem n'ọnọdu.
c) Njirimara nke nguzozi zuru oke, mmegharị ahụ dị nro, wdg, na-enyere onye ọrụ aka ịrụ ọrụ njikwa, nhazi na mgbakọ nke workpiece ngwa ngwa.
d) The isiike ogwe aka nwere ike ime ka manipulator na-ebu workpiece n'elu ihe mgbochi;ogwe aka kwụ ọtọ nwere ike izute ihe ndị a chọrọ na ntinye na nkwụsịtụ nke ihe ndị dị na ebe dị mkpa.
e) Usoro ahụ nwere ike ịnọgide na-enwe ọkwa isi nke onye na-eme ihe mgbe niile ma na-arụ ọrụ dị elu.
f) Ngwa breeki nkwonkwo, nke nwere ọtụtụ nkwonkwo rotary iji ghọta ịhọpụta ihe na ntinye na mpaghara sara mbara;Ejiri ngwaọrụ breeki, onye na-arụ ọrụ nwere ike ịkwụsị mmegharị nke manipulator n'oge ọ bụla n'oge ọrụ.
Ụdị onye nrụpụta ike a nwere ike ibuli ihe ruru 500Kg nke workpiece.Radius na-arụ ọrụ bụ ihe dịka 2500mm, na elu elu bụ ihe dịka 1500mm.Dị ka ndị na-ebuli workpiece arọ dị iche iche, kwesịrị ịhọrọ ndị kasị nta ụdị igwe na akara na kacha arọ nke workpiece, ma ọ bụrụ na anyị na-eji kacha ibu nke 200Kg nke manipulator na-ebu 30Kg nke workpiece, mgbe ahụ arụmọrụ arụmọrụ bụ n'ezie bụghị. dị mma, nwee mmetụta dị arọ nke ukwuu.Akụrụngwa ahụ bụ ọkọlọtọ nke nwere tank nchekwa ikuku, nke ka nwere ike mezue usoro ihe omume n'ihe banyere igbutu gas.N'otu oge ahụ, ọ ga-ama jijiji ichetara onye ọrụ.Mgbe ikuku ikuku na-adaba ruo n'ókè ụfọdụ, ọ ga-amalite ọrụ nkwụsị nke onwe ya iji gbochie ọdịda nke workpiece.Manipulator na sistemu nchekwa, n'ime usoro njikwa ma ọ bụ etinyeghị ihe eji arụ ọrụ n'ọdụ nchekwa, onye ọrụ enweghị ike ịhapụ ọrụ ahụ.Site na nrụnye dị iche iche na-abụghị ọkọlọtọ, onye na-ahụ maka ike ụdị ogwe aka siri ike nwere ike imezu usoro dị iche iche ngwa ngwa.
Nke gara aga: Onye na-eme ihe na ikuku ikuku
Osote: Onye na-eme ihe na iko mmiri ara
Onye na-emegharị ihe na gripper
Onye na-eme ihe na ikuku ikuku
Onye na-eme ihe na iko mmiri ara